Minisitra Rivo Rakotovao : « Hahaleo tena ara-bary i Madagasikara afaka telo taona » -
AccueilRaharaham-pirenenaMinisitra Rivo Rakotovao : « Hahaleo tena ara-bary i Madagasikara afaka telo taona »
18/04/2017 admintriatra Raharaham-pirenena 0
Nitondra fanazavana misimisy kokoa ny amin’ny tokony hampiasana ny masomboly amin’ilay vary safiotra antsoina amin’ny teny baiko “riz hybride” ny minisi-panjakana misahana ny Fambolena sy ny Fiompiana, Rivo Rakotovao. Tamin’izany no nilazany fa fanamby goavana ary tsy maintsy hahaleo tena ara-bary i Madagasikara afaka telo taona. Resadresaka…
Gazety Triatra (*): Andriamatoa minisitra, azonao hazavaina kely ve ny mahakasika ilay atao hoe “riz hybride” na vary safiotra? Efa mampiasa azy io ve isika amin’izao fotoana izao?
Minisitra Rivo Rakotovao (-): Io karazam-bary io dia nisy fikarohana efa elabe, tany amin’ny taona 1960 tany ho any ka ilay Profesora sinoa, Yuan Longping, no nahita io fampiraisana karazam-bary maromaro io. Anisan’ny vary afaka miady amin’ny tery rehetra amin’ny fomba fambolena, na eo amin’ny resaka tany, tsy fahampian’ny rano, havoana, lohasaha, sns, ny vary safiotra. I Vietnam no anisan’ny firenena nampiasa azy io voalohany. Efa ambony be ihany koa ny teknikam-pambolena any amin’izy ireo. Mikasika an’i Madagasikara manokana indray amin’ny fampiasana ny “riz hybride”, efa tao anatin’ny 15 izay no nanantona sy nifampiresaka tamin’io rangahy Sinoa io. Ny taona 2007 kosa no efa nampidirina teto Madagasikara ny vary safiotra. Manahirana antsika fotsiny, manaiky zavatra, manao zavatra isika dia mijanona hatreto amin’ny antenantenany ihany.
(*) Mikasika ny fahazotoana na sy faharisihan’ny mpamboly hampiasa sy hifototra amin’ny fambolena vary safiotra indray, manao ahoana isika amin’izao fotoana izao?
(-) Tena mbola manahirana be ihany ny mandresy lahatra ireo tantsaha any amin’ny tontolo ambanivohitra. Na izany aza, efa miezaka ny Fitondram-panjakana amin’ny alalan’ny minisitera eo anivon’ny Prezidansa misahana ny Fambolena sy Fiompiana amin’izany fandresen-dahatra izany. Olana mipetraka mantsy, tsy resy lahatra mihitsy ireo tantsaha any amin’ny tontolo ambanivohitra ireo raha tsy misy ohatra ny hitan’ny masony mihitsy. Anisan’ny nanafaka ny Sinoa tamin’ny filana ara-bary mihitsy mantsy ny Pr Yuan Longping. Rehefa hanao isika dia mila manaraka ireo fepetra maro samihafa amin’ny fambolena ka hahafahantsika manaparitaka azy. Mety ho izay no tsy ampy teto amintsika ka tsy nahafahantsika namokatra ara-dalàna. Isika ihany koa mety tsy mahalala azy io rehefa mihinana amin’ny andavanandro nefa efa 10 taona izay no nisiany teto.
(*) Manao ahoana indray, Andriamatoa minisitra, ny ahafantsika mahaleo tena ara-bary ohatr’ireo firenena mpihinam-bary ohatra antsika?
(-) Fanamby govana. Tsy maintsy mahaleo tena ara-bary i Madagasikara afaka telo taona. Tsy maintsy hoy aho, amin’ny fametrahana ny politika maharitra amin’ny famokaram-bary apetraky ny minisitera tompon’andraikitra. Ary izay no nahatonga ny Filoham-pirenena niteny amin’ny fampiasana ny fambolena io “riz hybride” io. Efa hita mantsy fa mety eto amintsika izy io. Izay ihany koa no atao amin’izao fotoana izao. Izay lesona izay koa no raisinay eto amin’ny minisitera. Mila arahina tsara ilay fepetra takiana amin’ny fambolena ny vary safiotra mba ahazoana vokatra tsara. Manaraka izany, lafobe be ihany koa ny vidin’ny masomboly tamin’ny fotoan’androny, izay mitentina 8 000 Ar, ka tsy nahafahantsika nanafatra azy io satria tsy hisy tantsaha hividy masomboly lafo izany mihitsy. Atao lesona ahafaha-mandroso mihitsy izany fa tsy hoe resahina amin’ny mpiara-miombon’antoka dia avy eo tsy hita akory izay hampiasana azy.
(*) Mikasika izay indrindra, ahoana na sy efa misy fiaraha-miasantsika amin’ny firenena Sinoa ve? Dia ohatry ny ahoana izay fiaraha-miasa izay?
(-) Efa misy ary tsy maintsy dinihina ny fomba fiaraha-miasa amin’izy ireo mba ahafahantsika manaparitaka azy eny amin’ny tontolo ambanivohitra. Anisan’ny vaindohan-draharahan’ny minisitera mpiahy mihitsy izany mba ahafahantsika mahaleo tena ara-bary sy manatsara ny voka-bary. Dinihina ihany koa ny hoe faritra aiza no afaka manao ilay izy. Raha ho an’i Chine manokana mantsy, efa mahatratra 7-9 taonina isaka ny hektara ny vokatra. Efa ambony be izany raha mitaha amin’ny vokatra vokarintsika izay mbola eo amin’ny 2 taonina ankehitriny. Mba ahafaha-mifehy izany, tafiditra indrindra amin’ny vaindohan-draharahan’ny minisitera ihany koa ny fananganana laboratoara. Ankoatra izay, efa jeren’ny fitondram-panjakana manokana ny fiaraha-miasa amin’ny fanjakana Sinoa satria mbola mahantra ny tontolo ambanivohitra eto amintsika. Raha ny tontolo ambanivohitra amin’ny fiharian-karena, tsy any amin’ny fivoahan’ny vokatra mihitsy fa any amin’ilay rohim-pihariana iny, tokony ho any ny famokarana ary any koa ny Fanjakana no manampy.
(*) Inona indray àry ny politika maharitra ho entin’ny Fitondram-panjakana amin’ny tontolon’ny fambolem-bary ka ahafahantsika mizaka tena?
(-) Mazava loatra, ny fanampiana ireo mpamokatra ireo ny politika maharitra mba ahafahan’izy ireo mampiakatra ilay taha-pamokarana. Any aoriana any mantsy, raha tonga 4 taonina ny famokarana, tsy hangataka na inona na inona amin’ny Fanjakana intsony izy ireo afa-tsy ny fotodrafitrasa goavana sy lehibe ihany, izay andraikitry ny Fanjakana tanteraka izay. Izay no ezaka lehibe atao amin’izao fotoana izao, na misy aza ny manahirana, toy ny haintany, tondra-drano, sns. Tsy mahasakana amin’ny fametrahana io politika maharitra io velively anefa izany. Aoka ihany koa ho fantatsika fa anisan’ny nampitontongana ny tontolo ambanivohitra ny Fitondrana Tetezamita. Tsy nataon’ny fitondrana tamin’izany laharam-pahamehana mantsy tamin’ny fotoan’androny. Tsy nisy ny masomboly, tsy nisy ny zezika, sns ka lasa niteraka io fahantrana io. Izay rehetra izay indrindra no hiadian’ny Fanjakana amin’izao fotoana izao. Tsy maintsy hampiana ireo mpamokatra ireo.